Coronavirus maneran-tany Miomana amin` ny fiatrehana ny andiany faharoa ?
Tsy mbola milanina ny fiatrehana ny ady amin` ny Covid 19 maneran-tany. Miha ratsy ny toe-draharaha any Etazonia: roa hetsy ireo namoy ny ainy.
Voarara tsy azo hanaovana fihetsiketsehana ny manodidina ny Champs-Elysées, toerana misy ny birao sy trano ipetrahan'ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron. Nafana ny tamin’ny sabotsy satria, nahatratra 128 ireo olona nosamborin’ny mpitandro filaminana noho fihetsika maherisetra nataon’izy ireo na noho ny fahatratrarana ireo fitaovana voarara teny amin'izy ireo, toy ny antsy, zava-maranitra, karazana vanja, vato maranitra, fanorahana tsilo (arc à fléchettes), … Mandray anjara amin'ny fihetsiketsehana ihany koa ireo "Gilets Jaunes" any amin’ny tanan-dehibe maro any Frantsa. Raha tsiahivina dia teraka fotsiny ity hetsika “Gilets jaunes” ity manoloana ny zava-misy miantraika amin`ny olo-pirenena tsotra fa tsy avy amina fikambanana na antoko politika na avy amina sendikà. Mahatsiaro mandalo fotoan-tsarotra ny vahoaka frantsay noho ny hasarotan` ny vidim-piainana. Tany am-piandohana dia fisintonana lakilosy ny fanjakana noho ny fampiakarana hetra nalaina amin`ny solika tamin` ireo olom-pirenena no anton` ny hetsika ka nampiseho an`izay fahasahiranana tamin`ny fidiana an-dalambe.